Myanmar Opens 46 CNG Stations | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalMyanmar Opens 46 CNG Stations
Myanmar Opens 46 CNG Stations
Myanmar has openedatotal of 46 compressed national gas (CNG) filling stations, 95 percent of which are in Yangon, according to U Hla Win Htay, general manager of Myanma Oil and Gas Enterprises.
“CNG stations in Yangon are selling CNG gas around the clock without any day off,” said the executive. “Onshore gas production is around 40 million cubic feet. If we operate two fertilizer plants, they will require 20 million cubic feet and the rest will come to CNG stations.
“Yangon requires around 22-23 million cubic feet for YBS buses and taxis, meaning we will need an additional 2.5 to3million cubic feet of supply,” he said. “For that we require gas from Zawtika offshore project.”
Forty-one CNG gas stations in Yangon serveatotal of 26,971 vehicles while two CNG stations in Mandalay provide gas to 742,asingle station in Chauck City serves 335 vehicles and two stations in Yenan Chaung 251 vehicles.
There are 109 gas compressors in Myanmar, including 55 high-power compressors, 12 medium-power compressors and 42 low-power compressors, according to Myanma Oil and Gas Enterprises.
CNG vehicles in Yangon include 1,280 transport trucks, 6,172 passenger cars and 17,103 taxis.
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မော်တော်ယာဥ်သုံး သဘာဝဓါတ်ငွေ့အရောင်းဆိုင် ၄၆ ဆိုင်ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းမှ ၉၅ ရာခိုင်နူန်း အထိဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပြီဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မော်တော်ယာဥ်သုံး သဘာဝဓါတ်ငွေ့အရောင်းဆိုင် ၄၆ ဆိုင်ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ၉၅ ရာခိုင်နူန်း အထိဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိနေကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးလှဝင်းဌေးက ကပြောသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဆိုရင် ဒီ CNG ဆိုင်တွေက ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဖြည့်တင်းရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ကုန်းတွင်းသဘာဝဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မူက နေ့စဥ် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သန်း ၄၀ ပဲထွက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဓါတ်မြေသြဇာ စက်ရုံ ၂ ရုံလည်မယ်ဆိုရင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သန်း ၂၀ ကျွန်တော်တို့ဆီ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သန်း၂၀ ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဥ် YBS ကားတွေ အပြင် Taxi တွေအခြားကားတွေအတွက် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သန်းပေါင်း ၂၂ သန်းခွဲနဲ့ ၂၃ သန်းခွဲလောက် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုတဲ့ ၂ သန်းခွဲကနေ ၃ သန်းခွဲလောက်ကို ဇောတိက ကမ်းလွန်စခန်းကနေပြီးတော့ ထိန်းပြီးပြန်ထည့်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်း ကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင်များ ၄၁ ဆိုင်မှ မော်တော်ယာဥ်အစီးရေ ၂၆၉၇၁ စီးကို နေ့စဥ်ဖြန့်ဖြူးလျှက်ရှိနေပြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် ၂ ဆိုင် မှ မော်တော်ယာဥ်အစီးရေ ၇၄၂ စီး ၊ ချောက်မြို့နယ် တွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် ၁ ဆိုင် မှ မော်တော်ယာဥ်အစီးရေ ၃၃၅ စီး ၊ ရေနံချောင်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် ၂ ဆိုင်မှ မော်တော်ယာဥ်အစီးရေ ၂၅၁ စီးကို နေ့စဥ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိနေကြောင်း အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးလှဝင်းဌေးက ကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင်များ အတွင်း ကွန်ပရက်ဆာ အလုံးရေ ၁၀၉ လုံးရှိပြီး ဖိအားမြင့် ကွန်ပရက်ဆာ အလုံးရေ ၅၅ လုံး အလယ်လတ်အားဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာ အလုံးရေ ၁၂ လုံး ဖိအားနိမ့် ကွန်ပရက်ဆာ အလုံးရေ ၄၂ လုံး တို့ရှိကြောင်း မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း မှသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ကုန်စည်တင်မော်တော်ယာဥ်ပေါင်း ၁၂၈၀ စီး ၊ ခရီးသည်တင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး မော်တော်ယာဥ် ၆၁၇၂ စီး ၊ Taxi သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ၁၇၁၀၃ စီး တို့ကို နေ့စဥ် သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိနေကြောင်း မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း မှသိရသည်။
Previous articleMyanmar’s International Airports to Get Surveillance Radar System
Next articleVillages Get Electricity from $2.6 Million Solar Plant